चिसोले स्किन बिग्रेर हैरान हुनुहुन्छ ? लगाउनुस यस्तो घरेलु उपाय – Kalika News
चिसोले स्किन बिग्रेर हैरान हुनुहुन्छ ? लगाउनुस यस्तो घरेलु उपाय
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:१४ , मा प्रकाशीत
चिसो याम सुरु भएसँगै बिभिन्न ब्यत्तीलाई आँफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी रहेको छ । तपाँईलाई त्यस्तो चिन्ता लागेको छ भने अब बिभिन्न घरेलु उपाएबाट पनि तपाईले आँफ्नो स्किनलाई केयर राख्न सक्नु हुनेछ । जसको लागि तपाँईले बिभिन्न उपाए अपनाउदा सहज हुने छ ।
देशी बदामको तेल
छाला सुक्खा हुने, फुस्रो हुने, चिलाउने, जलन हुने भएमा देशी बदाम को तेल लगाउने गर्नुस् । यसले तपाईंलाई समस्याबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले छालालाई आवश्यक पर्ने चिसोपन प्रदान गरी सुक्खा हुनबाट बचाउँछ । देशी बदामबाट छालालाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुन्छ र छाला ताजा, चम्किलो, स्वस्थ एवम् नरम हुन्छ ।
लिप बाममा कोको–नौनी
प्रायजसो बडी लोसन तथा लिप बाममा कोको–नौनी प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यो लगाउने गर्नाले फुटेको छालालाई धेरै फाइदा दिन्छ । साथै सुक्खा छालालाई पनि सुक्खा हुनबाट बचाइराख्छ । कोको–नौनीमा एन्टिअक्सिडेन्टको गुण भएकाले छालालाई चिसोपन बनाई नरम राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
सूर्यमुखी तेलमा भिटामिन ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ र ‘ई’ प्रशस्त हुन्छ । त्यसैले छालामा यसको प्रयोग गर्नाले सुकेको तथा बिग्रेको छालामा सुधार हुन्छ । अनि नरम, कलिलो र चिसोपना गराइराख्न सहयोग गर्छ । यो तेल स्वास्थ्यवद्र्धक पनि हो ।
नीम एक बहुउपयोगी रुख हो । यो रुखका प्रत्येक भाग विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन्छ । स्वास्थ्योपचारमा, खेतीपातीमा, सौन्दर्य सामग्रीहरुमा यसको धेरै उपयोग हुने गरेको पाइन्छ । शरीर चिलाउने र छालामा रातो–रातो देखा पर्नेहरुका लागि यो तेलको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ । चाउरीपन हटाउने कार्यका लागि पनि यो तेल सेवन गर्नु बडो प्रभावकारी देखिएको छ । यसमा एन्टिसेप्टिक गुण पनि छ । सुक्खा छालालाई चिसो गरिराख्न धेरै मद्दत गर्छ ।
काँक्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायी रहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रमाणित भइसकेको छ । यो खानको लागि मात्र नभई सौन्दर्य बढाउनमा पनि विशेष उपयोगी देखिएको छ । काँक्रोको सेवनले छालालाई चिसोपन र ताजा बनाइराख्न मद्दत पुर्याउँछ । यसको प्रयोग अनुहारको छालामा पनि गर्न सकिन्छ । बिग्रेका छालालाई स्वस्थ बनाउन पनि काँक्रो सहयोगी हुन्छ ।
आजकल घिउकुमारीका बारे निकै चर्चा हुने गरेको छ । यसमा हुने बहुउपयोगी गुणका कारण स्वास्थ्य र सौन्दर्य क्षेत्रमा यसको धेरै प्रयोग हुन्छ । यसलाई छालामा प्रयोग गर्दा छाला नरम पार्छ, सुक्खा हुन दिँदैन र प्राकृतिक हानिकारक अल्ट्राभायोलेट किरणबाट बचाइराख्ने गर्छ ।
फर्सीको बियाँको तेलमा फ्याट्टी एसिड, जिङ्क, भिटामिन ‘ई’ र बेटा क्यारोटिन प्रशस्त पाइन्छ । त्यसैले यसको तेल सेवन गर्ने गरेमा छाला सुक्खा हुन दिँदैन र छालामा भएको चिसोपनलाई कायम राख्ने काम गर्छ । यसले गर्दा छाला नरम, ताजा तथा कलिलो देखिने हुन्छ । तेल मात्र नभएर फर्सीको बियाँ नै खानु पनि सौन्दर्यका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ ।
अंगुरको बियाँको तेल ९न्चबउभ यष्०ि मा ब्कतचष्लनभलत को गुण भएकोले छाला झुल्न नदिई तन्काइराख्ने काम गर्छ । यो तेल सेवन गर्ने र छालामा लगाउने गर्दा छाला कसिलो हुन्छ । यसले छालामा भएको चिसोपनलाई सञ्चित गरिराख्ने भएकाले छाला सुक्न दिँदैन । छाला सुक्खा भएन भने कोमल र ताजा देखिन्छ ।
प्रदेश नं ५ समाचारः कपिलवस्तुका मृतकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
मन्त्री बस्नेतद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
महालेखापरीक्षकबाट आधा महिनाको तलब सहयोग
कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्नको मृत्यु भएमा रु ५० लाख दिइने
स्थानीय तहलाई रु १३ करोड उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय
नेकपा सचिवालय : सरकारका कदम अझ प्रभावकारी बनाइने